यी सपना देख्नुभयो भने मिल्छ लक्ष्मी माताको कृपा, चाडै बन्नुहुनेछ मालामाल ! - Babal Khabar
October 17, 2021 by बबाल खबर
धार्मीक मान्यता अनुसार हर सपनाको केहि न केहि अर्थ रहने गर्दछ यस प्रकारका सपनाले ब्यक्तिको जीवनमा घट्ने घ’टनाको अग्रीम जानकारी गराउने मान्यता छ।
यस्ता सपनामा देखियो बस्तु वा स्थानले मानिसमा सकारा’त्मक वा नकारा’त्मक दुबै प्रकारका असर पार्ने गर्दछ। कतिपय सपनाले मानिसमा धनलाभको समेत संकेत गर्दछ।
कुन -कुन सपनाले मानिसलाई धनवान् बनाउने संकते गर्छ त ? यदि सपनामा कसैले बिरालो, उल्लु र घोडा देख्यो भने ती ब्यक्तिउपर माता लक्ष्मीको कृपा बर्सिने मान्यता छ ।यदि सपनामा आफुले घोडसवारी गरेको देखियो भने आगामी भाग लिएको प्रतियोगितामा सफलता पाउने मान्यता छ ।
सपनामा घोडा चढेको देखेमा रोकिएको पैसा छिट्टै फिर्ता हुने मान्यता रहेको छ। सपनामा माता लक्ष्मी वा भवानीको दर्शन गरेको देखेमा छिट्टै धनवर्षा हुने मान्यता छ।
यदि सपनामा कसैले आभूषण धारण गरेको वा खरीद गरेको देखे भविष्यमा अधिक धनवान हुने संकेत गर्दछ। यदि सपनामा कमल कोफूल धारण गरेको देखे या अरुले फुल भेटगरेको देखेथालेको काममा अपार सफलता प्राप्त हुनेछ ।
यदि सपनामा साना उमेरमा बालिका देखे देवीशक्तिको विशेष कृपा हुनेछ। कसैले सपनामा मन्दिरको दर्शन गरेको देखे त्यो अत्यन्त शुभ मानिन्छ।
यदि सपनामा मन्दिर देखेमा आउने समयनिकै शुभ हुनेछ भन्ने संकेत मानिन्छ । सपनामा कुलदेवताको दर्शन गरेको देखेमा जीवनमा विद्यमान सबै क’ष्ट, सं’कट ना’शभएर जाने मान्यता छ। नयाँपुस्ताबाट साभार यस्तै हिन्दु परम्परा अनुसार धेरैले आफ्नो राशीफलमा विस्वास राख्ने गर्दछन् ।
जीवनको स’म्पुर्ण कुरा राशी फलमा लेखिएको भन्ने कुरामा विश्वास राख्ने गरेका हुन ।
ज्योतिषी भाषा अनुसार भन्ने हो भने तपाईहाम्रो जीवन राशिअनुसार चल्छ । तपाईमाथि गृह, नक्षेत्रको के कस्तो प्रभाव परेको छ, यो कुरा राशिले स्वतः दर्शाउँछ ।
आधुनिक युगमा जीइरहेकाले हामी ज्योतिषीसँग खासै सरोकार राख्दैनौं । तर, सत्य यो पनि हो कि जो समस्या जोतिषीद्वारा हल गरिन्छ, त्यो अन्य उपायबाट समाधान हुन सक्दैन ।
कुनै पनि व्यक्ति कस्तो होला ? जस्तो देखिन्छ के वास्तवमै त्यो व्यक्ति त्यस्तो होला ? यी सबै सवालको जवाफ पनि हामीलाई ज्योतिषीको माध्यमबाट मिल्न सक्छ ।
जीवनको गोप्या कुराको खुलासा पनि तपाईको कुण्डलीले गर्छ । तर यी सबैको इतर ज्यातिषी विद्याको एक अर्को खास विशेषता छ। जसअन्तर्गत तपाई कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको राशिको माध्यमबाट पनि चिन्न सक्नुहुनेछ। अर्थात राशिको अन्तर्यमा एक खास खुवी हुन्छ, जुन व्यक्तिको जस्तो राशि हुन्छ त्यो खुवी स्वतः उसभित्र प्रेवश गर्छ।
यो आलेखमा तपाईको राशिको एक महत्वपूर्ण खुवीबारे उल्लेख गरिएको छ। ज्योतिषीअनुसार जति पनि राशि छन् ती सबै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । तर, त्यसमध्ये पनि ४ वटा राशि यस्ता छन्, जो वास्तवमै धेरै बलिया हुन्छन् । यी राशिहरु यती बलवान हुन्छन् की, त्यहाँ अरुले दबिएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
मेष राशि: यो श्रेणीमा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा मेष राशि छ। जो राशि अन्य सबै राशिभन्दा उर्जावान मानिन्छ। यो राशिका मानिसहरु सधैं सक्रिय रहन्छ, रोक्नु यीनिहरुको स्वभामा हुँदैन्। यदी कसैले यो राशिका मानिसहरुलाई दिक्क बनाउँछ भने उनीहरुले त्यसको वास्ता गर्न छाडिदिन्छन्। मेष राशिका मानिसहरु कसैमाथि भरोसा गर्दैनन्।
कुनै पनि कुरालाई सधैं आफू मातहत राख्न सक्षम हुन्छन् । कुनै पनि कार्यमा आफ्नो निर्णय लागू गर्न चाहान्छन्, र धेरैजसो अवस्थामा सफल पनि हुन्छन् । यीनिहरु कसैसँग प्रभावित भएर आफ्नो जीवनको दिशा बदल्दैनन्। बृश्चिक राशि: बृश्चिक राशिका मानिसहरु समर्पित र इमान्दार हुन्छन् ।
साथै यस राशिका व्यक्तिहरुको भित्र वि’द्रोही भावना पनि प्रमुखताका साथ हुन्छ। जो मानिसहरु योग्य हुन्छन्, उनीहरुसँग यस राशिका व्यक्ति इमान्दारी निभाउँछन। तर, जो व्यक्तिहरु खुद धोकेबाज हुन्छन् ती व्यक्तिहरुले भने यस राशिका व्यक्तिबाट सदैव सावधान रहनु जरुरी हुन्छ।
यो राशिका मानिसहरु धेरै भावुक पनि हुन्छन् ।जसकारण कहिलेकाँही यीनिहरुलाई सहन मुस्किल पनि हुन्छ । बृश्चिक राशिका मानिसहरुमा भविश्यका संभावित घटनाबारे थाहा पाउने अद्भुत क्षमता हुन्छ ।
कुम्भ राशि: कुम्भ राशि भएका मानिसहरुको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको के हो भने उनीहरु भावनामा बगेर कुनै निर्णय गर्दैनन् । यदी जरुर पर्यो भने यीनिहरु आफ्नो भावन र समवेदनाहरुको पनि वास्ता नगरी अगाडि बढ्न सक्छन् । कुम्भ राशिका मानिसहरु धेरै रोचक र जिज्ञासु हुन्छन् । यीनिहरु बुद्धिमान पनि मानिन्छन् । यीनिहरु जिद्धी स्वभावका हुनुका साथै आत्मविश्वासी पनि हुन्छन् ।
मकर राशि: यो राशि सबैभन्दा उत्कृष्ट राशि मानिन्छ, किनभने यो राशिका मानिसहरुमा आत्म नियन्त्रणको भावना धेरै प्रबल हुन्छ । अन्य राशि भएका व्यक्तिको मकर राशिवालाहरुमा उत्कृष्ट तरिकाले सोच्ने र सम्झने क्षमता हुन्छ । यो राशिका मानिसहरु सधैं सक्रिय रहन्छन् । मकर राशिका मानिसहरुमा आत्मविश्वास धेरै नै हुन्छ । जस कारण यो राशिका मानिसहरु धेरै छिटो सफलता हासिल गर्न सक्छन् । साभार गरियको खबर ।
Prevबिहेको भोलिपल्ट बिना मेकअप श्रीमतीलाई देखेपछि पतिले दिए उजुरी…
nextजीवनसाथीका लागि धेरै नै भाग्यशाली हुन्छन् यी राशी हुनेहरु !